You Bụ Onye Na-ahụ Maka Ndụmọdụ Social Media? | Martech Zone
N'abalị ụnyaahụ enwere m ohere dị ịtụnanya ị ga-aga ma zute ma gee onye mmeri Indianapolis 500 oge, Helio Castroneves. Abụ m onye ọbịa nke onye na-akwado na onye nchịkwa arụmọrụ David Gorsage, onye jụrụ ma m ga-eweta mmelite mgbasa ozi mmekọrịta na ihe omume niile. Ka m na-ahazi hashtags, soro ndị na-akwado ya, wee mata ndị VIP nọ n'ime ụlọ ahụ, otu ọkachamara na-agba ọsọ jiri nwayọ gbadaa wee jụọ:
ị n'ezie onye na-ahụ maka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ?
Whichzọ o si jụọ ya jidere m na nche… dịka a ga - asị na ọ na - ajụ, bụ na n'ezie ihe? Nke ka njọ bụ mmeghachi omume m. O were m iwe. Ọ bụghị na ọ na-eche ma ọ bụ na-elekọta mmadụ media bụ a viable ahịa ọwa… na o chere na m bụ otu n'ime ndị ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta. M na-eme ka ọ mara na m bụ onye ndụmọdụ ịzụ ahịa na nzụlite na ọdịnala na mgbasa ozi dijitalụ, nwere agụụ maka ịbawanye nsonaazụ maka ụlọ ọrụ B2B na SaaS.
Ọ kesara akụkọ banyere otu ụlọ ọrụ ya goro onye na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta na afọ ole na ole gara aga n'ihi ụda niile na-aga n'ihu na mgbasa ozi. O kwuru na onye ahụ rụrụ ọrụ magburu onwe ya na mgbasa ozi mgbasa ozi, mana ọ dịghị mgbe ọ rụpụtara azụmaahịa ziri ezi. O kwuru na ha mechara hapụ onye ahụ maka na ha ga-ewe iwe na ihe achọrọ iji kwado ROI na onye na-ajụ ya. Ọ na-eche ya ma ọ bụrụ na ọ dị mgbe ọ bụla.
Aghaghị m ịkpachara anya na nzaghachi m. Ekwenyere m na mgbasa ozi mgbasa ozi, mana ọ bụghị eziokwu my gaa na ọwa mgbe mụ na onye ahịa na-arụ ọrụ na usoro nnweta - ọchụchọ bụ. Ezie na nke ahụ yikarịrị n'ihi ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ, ọ bụkwa ihe metụtara ebe omume m na nka m dị. M hụrụ n'anya na-ekere òkè na-ekere òkè na-elekọta mmadụ media ụbọchị ọ bụla, ma m adịghị eme ihe n'eziokwu na-ele ya anya dị ka ihe nnweta ọwa - ọbụna na m ụlọ ọrụ.
Nke ahụ kwuru, amaara m ọtụtụ ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ha na-eme mkpọsa nwere atụ, na-eme ka mmadụ mata, na ọbụna na-arụ nnukwu ọrụ n'ịzụta ndị ahịa n'ịntanetị. Emere m ka nke ahụ doo anya nwa nwoke m na-agwa okwu - mana echeghị m na ọ bụ azịza maka azụmaahịa ọ bụla. Echere m na ndị na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ nwere ike iweta uru na nzukọ na-abụghị nke nnweta kpọmkwem:
Monitoring akara gị na ndị asọmpi n'ịntanetị iji chọpụta nsogbu na ohere dị n'ime ụlọ ọrụ gị. Enwere ọtụtụ ozi ndị ụlọ ọrụ na-ewebu ọrụ nyocha na nyocha ọnụ ọgụgụ iji nweta ohere. Ugbu a ọ na-adịkarị n'ọtụtụ nyiwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Anyị hụrụ n'anya Agorapulse - nke m na-a ika nochite anya maka.
Ahịa Successga nke Ọma bụ ike ọzọ nke mgbasa ozi mmekọrịta. Y’oburu n’inwere ndi otu ihe oru nyeere gi aka nke nwere ike ichota amuma maka ndi n’acho na ndi di ugbu a, soshal midia nwere ike buru ezigbo uzo iji wulite ntụkwasị obi ma jigide ndi ahia.
Mmata bụ usoro siri ike iji tụọ ROI na, mana ọ bụ nnukwu ọrụ nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta siri ike. Agbanyeghị, ọ bụ nke ọzọ chọrọ talent. Heardnụ olu olu gị ma gbasaa n'etiti ọha mmadụ adịghị mfe, mana ọ nwere ike ịdị ọnụ ahịa. N'oge ụfọdụ, ọ bụrụ na asọmpi gị na-akụda gị… mkpa ka ị nwee ike ịlele ma atụmanya mara azụmahịa gị bụ nhọrọ.
Trust bụ uru ọzọ nke mgbasa ozi mmekọrịta na-esiri ike ịlele. Enwere m ike ịme nyocha na ntanetị wee chọta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ m chọrọ ịzụta… mana m ga-agagharị na otu ndị otu LinkedIn ma ọ bụ ndị otu Facebook ma jụọ maka echiche ha. Ọ bụrụ na m hụ ọtụtụ ihe na-adịghị mma n'ebe ahụ, m ga-aga na nke ọzọ. Inwe ndị na-agba ọsọ na-ekerịta ụda gbasara etu ụlọ ọrụ gị si dị n'ịntanetị nwere ike ọ gaghị abụ naanị ọrụ maka mkpebi ịzụta, mana ọ nwere ike inye aka.
Ana m eme ka ọ mata na, ebe m na-abụghị onye na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi oge niile, ọ dịghị mgbe m leghaara ndị ahịa ọ bụla anya. M na-ejikọtakarị ngwaọrụ iji bipụta ma kesaa ozi ọma na ntanetị na ndị na-ege ntị, m ga-ewulitekwa usoro nzaghachi nke ụlọ ọrụ nwere ike ịzaghachi. Emere m nke a n'ihi na enweghị m ike ịkọwa ihe onye na-ahụ maka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-arụ oge niile, mana ndị ahịa m ghọtara na ihe ọma nwere ike ịpụta na mgbasa ozi.
Ma, m dụrụ ya ọdụ na ụlọ ọrụ ya nwere ike ọ gaghị ahụ ezigbo onye ndụmọdụ iji nyere ha aka. Echere m na nnukwu onye na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịkọwa mmefu nke usoro a… ma ọ bụrụ na ha enweghị ike, ha ga-eme ihe n'eziokwu banyere otu a ga-esi jiri ya na-enweghị ego nke ọkachamara ezubere iche.
Na ọduọ, ebe e nwere ihe dị nnọọ nta nkewa n'etiti Fans na ọkwọ ụgbọala, m na-eche na-elekọta mmadụ media ahịa kwesịrị nwee uru na ihe akaebe nke ROI. Ndị na-agba ọsọ na-agba ọsọ nwere njikọta na ụdị ndị na-akwado ndị ọkwọ ụgbọ ha - n'adịghị ka egwuregwu ọ bụla ọzọ. Kesa ụdị ndị ahụ site na mgbasa ozi mmekọrịta, ebe ị na-enye ndụ nke onye ọkwọ ụgbọ ala ohere dị egwu. Hazie na ndị na - akwado gị wee tụọ ihe gbasara ịzụ ahịa na ịzụrụ ndị Fans! Na ịgwa ya okwu, ọ dị ka nke a bụ ihe onye ndụmọdụ ha lebara anya. Ikekwe ohere furu efu.
Echere m na m gbanwere obi ya banyere ọwa… na ime nke a, agbanwere m echiche m banyere okwu ahụ onye na-ahụ maka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ dị ka nke ọma.
Tags: nnwetaMmataNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịa ihe ịga nke ọmanjigideROIọrụ ndị ahịaonye na-ahụ maka mgbasa ozi na-elekọta mmadụelekọta mmadụ media roi